Qhagamshela iselfowuni kwiTV: zonke iinketho ezikhoyo namhlanje | Iindaba zeGajethi
Qhagamshela iselfowuni kwiTV
UIgnacio Sala | | Iiselfowuni, ZeThelevishini
Ngokufika kwamacwecwe kwintengiso kwaye ukusukela ukuba iifowuni zithatha indima yomninawa omncinci wamacwecwe, ezibonelela ngescreen kwimeko ukuya kuthi ga kwii-intshi ezi-6, abasebenzisi abaninzi bashiya iikhompyuter zabo bucala Sebenzisa naluphi na uhlobo lomxholo nge-smartphone okanye ithebhulethi yakho.
Inxalenye yesityholo, ukuyibiza ngandlela thile, ikwagcinwe ngabaphuhlisi, abaphuhlisi abasebenza ukuhlangabezana neemfuno anokuthi nawuphi na umsebenzisi aqhelekileyo abe nazo ngekhompyuter, kubandakanya ukhetho lokuyiqhagamshela kwikhompyuter yethu. Kule nqaku siza kukubonisa iindlela ezahlukeneyo ezikhoyo ngoku qhagamshela iselfowuni yethu kwiTV.
Kwiivenkile ezahlukeneyo zikaGoogle kunye neApple singafumana usetyenziso lwazo zonke iintlobo, ukusuka kwezo zisinika ukufikelela kuthungelwano lwentlalo, ukuya kwezo sivumele ukuba sivelise kwakhona naluphi na uhlobo lomxholo igcinwe kwikhompyuter yethu kwezo zisivumela ukuba sizikhuphele ngaphandle kokusebenzisa ikhompyuter nangaliphi na ixesha.
Ukubona amathuba akhoyo kwintengiso yabasebenzisi ukuba bashiye iikhompyuter zabo zilahliwe, kweli nqaku siza kukubonisa iindlela ezahlukeneyo ezikhoyo. qhagamshela iselfowuni yethu kumabonwakude, nokuba sikubone ngqo kwiscreen se-smartphone yethu okanye ukonwabela iividiyo okanye iimuvi kwiscreen esikhulu sekhaya lethu. Kodwa kuqala ndiza kuchaza ezinye izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo, kuba ayizizo zonke iinkqubo zonxibelelwano ezisinika amathuba afanayo.
1 Yintoni Miracast
2 Yintoni iAllShare Cast
3 Yintoni i-DLNA
4 Yintoni idlalwe
5 Xhuma i-smartphone ye-Android kwi-cable yeTV
5.1 Unxibelelwano lwe-HDMI
5.2 Unxibelelwano lweMHL
5.3 Unxibelelwano lweSlimport
6 Xhuma i-smartphone ye-Android kwiTV ngaphandle kwentambo
6.2 Ibhokisi yeTV
7 Qhagamshela i-iPhone kwiTV
7.1 Umbane kwintambo ye-HDMI
I-Miracast ivumela ukuba sabelane jonga umxholo wedesktop yefowuni yethu kwisikrini esigcweleyo kumabonwakude wethu umzekelo, imidlalo okanye isicelo esifuna ukusibona kubukhulu obukhulu. Ngokucacileyo, singayisebenzisa ukudlala iividiyo kunye nevidiyo esiyigcinileyo, kodwa ingxaki evelayo kukuba iscreen sesixhobo sethu kufuneka sihlale sikhona, kuba ngumqondiso oveliswa kwakhona kumabonwakude.
I-Miracast iyahambelana nezixhobo ze-WiFi ngqo, Ke ukuba sinomabonwakude ohambelana nale teknoloji kunye ne-smartphone enohlobo oluphezulu kune-Android 4.2, ngekhe sibe nangxaki ukuthumela i-desktop ye-smartphone yethu ngokuthe ngqo ngaphandle kweentambo kumabonakude wethu.
Yintoni iAllShare Cast
Njengesiqhelo, umenzi ngamnye unemania phinda unike ezinye iiprotocol ukuzama ukuthatha ukufaneleka kwendalo yayo. I-AllShare Cast iyafana neMiracast, ke ukuba uneTV ye-AllShare Cast unokwenza imisebenzi efanayo ne-Wifi Direct.
Le yenye yezona nkqubo zithandwayo kwaye yenye yezona zixhobo zisetyenziswa kwintengiso. Le protocol iyasivumela yabelana ngomxholo kwinethiwekhi nasiphi na isixhobo esidityaniswe kuyongaphandle komenzi. I-DLNA iyafumaneka kwinani elikhulu leeTV ezikrelekrele, kodwa nakwii-smartphones, abadlali beBlu-ray, iikhompyuter ... Siyabulela kule protocol singathumela nayiphi na ifayile yeaudiyo okanye yevidiyo kuso nasiphi na isixhobo esidlala ngqo, njenge iselfowuni okanye ithebhulethi.
NjengeSamsung, iApple ikwanayo Imfuno engxamisekileyo "yokuqamba" inkqubo yonxibelelwano engenazingcingo yolu hlobo lubizwa ngokuba yi-AirPlay. I-AirPlay isinika amanqaku afanayo netekhnoloji ye-DLNA kodwa inciphisa ukuhambelana kwayo nezixhobo zenkampani, oko kukuthi, isebenza kuphela nge-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod touch.
Obu buchwephesha bufike kwintengiso ngo-2010 nakwiminyaka esixhenxe kamva, kwi-2017, inkampani esekwe eCupertino iyivuselele ibabiza ngokuba yi-AirPlay 2 kwaye ibonelela ngemisebenzi efana nokubanokwenzeka dlala umxholo ngokuzimeleyo kwizixhobo ezahlukeneyo ekhaya, umxholo okwifomathi yevidiyo yeaudiyo.
Okwangoku kwimarike kunzima ukufumana, ukuba akunakwenzeka, umabonwakude okanye umdlali weBlu-ray ohambelana nale teknoloji, kuba ukuze sikwazi ukuyisebenzisa kufuneka sihambe ngebhokisi kwaye sithelekise i-Apple TV, isixhobo ekujongwe ukuba obu bugcisa bulungiselelwe bona.
Xhuma i-smartphone ye-Android kwi-cable yeTV
Inkqubo yokusebenza ye-Android iyafumaneka kwinani elikhulu labavelisi kwaye nganye nganye isinika iindlela ezahlukeneyo zokukwazi ukwabelana ngomxholo we-smartphone yethu nomabonwakude. Gcina ukhumbula ukuba ayingabo bonke abavelisi abasinika olu khethoNangona ixesha elithile ngoku, kwaye ngakumbi kwii-smartphones eziphezulu, olu khetho phantse lunyanzelekile.
Nangona inani lezixhobo ezinonxibelelwano lwe-HDMI alikho likhulu kakhulu, kwintengiso singafumana isiphelo esingaqhelekanga ngolu hlobo lonxibelelwano, kwinguqulelo encinci, esivumela ukuba Intambo elula iqhagamshela i-smartphone yethu kwiTV kwaye udlale zombini idesktop, imidlalo kunye neemovie kwiscreen esikhulu sekhaya lethu.
Olu hlobo lonxibelelwano Yeyona isetyenziswa kakhulu kwiminyaka yakutshanje ngabavelisi. Ukuba i-smartphone yethu iyahambelana neMHL kufuneka sixhume ikhebula le-USB kwelinye icala kunye ne-HDMI kwelinye. Ukuze yonke into isebenze ngokufanelekileyo kufuneka siqhagamshele kwitshaja ye-smartphone yethu kwintambo, ukuze ibonelele ngamandla ngokwaneleyo ukuthumela ikhusi nayo yonke into evelisayo. Le nkqubo isibonisa isikrini se-smartphone yethu kwiTV kwaye isivumela ukuba sonwabele imidlalo okanye iimuvi kwiscreen esikhulu.
Njengoko benditshilo apha ngasentla, ayizizo zonke ii-smartphones ezihambelana nale teknoloji, ke ukuba xa usebenzisa le ntambo kunye ne-smartphone yakho uphawu aliboniswanga kwiTV yethu, oko kuthetha ukuba ngekhe sikwazi ukwenza ikrini ye-smartphone yethu Kumabonwakude, ubuncinci ngentambo. Intambo ye-MHL inexabiso elimalunga nee-euro ezingama-10 kwaye sinokuyifumana ngokukuko nakweyiphi na ivenkile yekhompyutha ebonakalayo.
I-Sony kunye ne-Samsung ngabenzi abaphambili ababonelela ngolu hlobo lonxibelelwano kwii-smartphones zabo, into ethi kuya kufuneka ucinge ukuba ucwangcisa ukuyivuselela kungekudala kwaye ufuna ukusebenzisa le ndlela.
Abavelisi banomkhwa wokusimisa ngokudibeneyo kunye neSlimport lelinye ityala elitsala umdla, kuba lisivumela ukuba senze okufanayo nakwi-MHL, kodwa sifuna intambo ebiza kakhulu, ethi inexabiso elikufutshane nee-euro ezingama-30. Omnye umahluko kunxibelelwano lwe-MHL kukuba akuyomfuneko ukunxibelelana netshaja eshukumayo kwintambo ukuze isebenze. Abenzi abaphambili abakhetha le nkqubo yiBlackBerry, LG, Google, ZTE, Asus ...
Xhuma i-smartphone ye-Android kwiTV ngaphandle kwentambo
Ukuba sifuna ukuthumela nayiphi na ividiyo okanye umculo kumabonwakude wethu ngaphandle kokusebenzisa iintambo, kufuneka sisebenzise Izixhobo ezihambelanayo zikaGoogle Cast, Itekhnoloji ehambelana ne-Android kwaye esivumela ukuba sithumele umxholo kwisixhobo esincinci esidibanisa kwizibuko le-HDMI kumabonwakude wethu kwaye ke sonwabele iividiyo kwiscreen esikhulu. Olu hlobo lwenkqubo alusivumeli ukuba sithumele yonke i-desktop kumabonwakude, ngokungathi singayenza ngeentambo endizikhankanyileyo ngasentla.
Ukuba sifuna isixhobo solu hlobo esisinika iziqinisekiso ezoneleyo ukuze singabinangxaki yokuzala, Olona khetho lufanelekileyo kwintengiso yiChromecast kaGoogle, isixhobo esiqhagamshela kwizibuko le-HDMI likamabonakude nalapho sinokuthi sithumele iividiyo kunye nomculo oza kudlalwa kumabonwakude wethu.
Kwimarike sinokufumana ezinye iintlobo zezixhobo ezilawulwa yi-Android ezibonelela ngokuhambelana neGoogle Cast, kodwa nayo sivumele ukuba sonwabe kwimidlalo efakwe kwisixhobo ngokungathi siselfowuni. Ukuba ufuna ukubona ukuba yeyiphi na efanelekileyo efanelekileyo kwiimfuno zakho, ungadlula kwinqaku Iibhokisi ezintlanu zeTV ezine-Android kulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali.
Qhagamshela i-iPhone kwiTV
I-Apple ibisoloko isaziwa ngokuzama ukulawula yonke into enxulumene nezixhobo zayo, ukusuka kwintambo yokutshaja (izikhonkwane ezingama-30 kunye ngoku noMbane) ukuya kwiiprotokholi zonxibelelwano nezinye izixhobo. Njengoko kusaziwa, ngaphandle kokuba unxibelelwano lweBluetooth, i-iPhone ayinakho ukuthumela naluphi na uxwebhu okanye ifayile ngeBluetooth, Ngaphandle kokuba ibe yi-iPhone.
Kwimeko apho sifumana khona, iApple iyabuya ukuze ihambe nayo kwaye ukuba sifuna ukubonisa iscreen se-iPhone yethu kumabonwakude, asizukukhetha ngaphandle kokungena ebhokisini kwaye sifumane i-Apple TV , okanye ubambe intambo ehambelana nayo, Intambo engabizi kakhulu. Akukho zinketho ngoku malunga noku.
Umbane kwintambo ye-HDMI
Eyona ndlela ingabizi kakhulu yokubonisa umxholo we-iPhone, i-iPad okanye i-iPod touch kumabonwakude ifumaneka kuMbane kwi-HDMI intambo, intambo ethi izakusibonisa ujongano olupheleleyo, kubandakanya idesktop zesixhobo sethu kumabonakude. Umbane iadaptha yesinxibelelanisi sedijithali. Le adaptha inexabiso lama-euro angama-59 kwaye ikwasivumela ukuba sihlawulise isixhobo ngelixa sidlala umxholo kwiTV.
Kodwa ukuba asinalo uqhagamshelo lwe-HDMI kumabonwakude wethu, sinokusebenzisa i- Umbane kwiadaptha yeVGA, iyasivumela qhagamshela isixhobo sethu kwigalelo leVGA kumabonwakude okanye esweni. Kule meko, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba isandi siya kwenziwa kwakhona ngesixhobo, hayi ngomabonwakude njengoko sinjalo kwimeko yeadaptha ye-HDMI.
Olunye ukhetho olukhoyo kukuthenga i-Apple TV, ukuqala ngemodeli yesi-4 yesizukulwane, kuba yeyona modeli indala iApple isathengisayo. Esi sixhobo sikwasivumela ukuba sibonise umxholo wesixhobo sethu kwiTV, nokuba idesktop ngokwenza isipili okanye ukuthumela umxholo ngqo kwiApple TV nokuba ngumculo okanye ziividiyo. Isizukulwana se-4 se-Apple TV kunye ne-32GB yokugcina Inexabiso le-159 euro. I-Apple TV 4k Ixabiso le-32 GB li-euro ezingama-199 kwaye imodeli engama-64 GB ifikelela kuma-euro angama-219.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » ZeThelevishini » Qhagamshela iselfowuni kwiTV
Seedi, i-hybrid console evumela ukudlala imidlalo kwiCD